SHacabka degmada Afgooye oo ka banaan baxey canshuuro lagu soo rogey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com SHacabka degmada Afgooye oo ka banaan baxey canshuuro lagu soo rogey.
SHacabka degmada Afgooye oo ka banaan baxey canshuuro lagu soo rogey.
Previous articleXabaal wadareed la helay iyo dilal oo laga soo sheegayo G/waqoyi bari kenya/ yaa loo aaneynayaa?.
Next articleQeyb kamid ah Barlamaanka maamul goboleedka K/G oo la dhaariyey.